Sida loo Beddelaan AVI in DivX
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVI in DivX
Waxaa jira wax badan oo ka mid ah waxyaabaha DivX-socon, laga bilaabo ciyaartoyda DVD in telefoonada gacanta iyo sidoo kale ciyaartoyda Blu-ray iyo HDTVs. Haddii aad leedahay aaladda in uu shahaado la logo DivX ee ku yaal, waxaa jira fursad aad u baahan doonaa si loogu badalo videos ama filimada si aad u qaab DivX ka hor. Waxaad aadan mid ka mid ah oo kaliya in lagu khaldin laga yaabaa in sababta qaar ka mid ah files AVI waxaa la ciyaari karaan qalabka DviX, laakiin dadka kale ma.
Sida xaqiiqadu, file AVI ah waa qaab video ama weelka, halka DivX waa codec video ah. File AVI An la encoded laga yaabaa in mid ka mid ah oo kala duwan video codecs sida DivX, Xvid, H.264 ama MJPEG. Files ayaa AVI encoded la non-DivX codec yihiin si dabiici ah ma ay taageerayaan qalabka certified DivX. Taasi waa sababta ugu weyn. Ku filan tahay, waxay kuu ogolaanaysaa hoos sida ay noqon doontaa in aad awoodid in aad xaliso files AVI incompatibility la qalabka certified DivX.
Xalka ugu wanaagsan waa in la isticmaalo Converter video ah. Haddii aad qabto Converter video ah, aad xitaa ma u baahan tahay in la ogaado waxa wax soo saarka qaab ugu fiican ama codec loo baahan yahay. Waxaad si fudud loogu badalo kartaa AVI video files si DivX gudahood saddex tallaabo oo fudud. Waxa ay noqon doontaa loo maqli siman on DivX qalabka certified ka dib.
Qeybta 1: Best AVI in DivX Video Converter
Qeybta 2: AVI Free in DivX Converter
Qeybta 3: AVI Online in DivX Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u AVI iyo DivX
Presets la goobaha filaayo in DivX iyo qaabab kale wax soo saarka ama qalab.
Loo maqli siman oo leh qalabka certified DivX.
Diinta Ultra-dhakhso ah xitaa file a AVI waaweyn.
U beddelaan qalabka kale caan ah oo loo maqli karo sida telefoonada gacanta iyo kiniiniyada.
Sida loo badalo AVI ah in DivX
Tutorial hoos ku qoran ayaa loo diyaariyey dadka isticmaala Windows. Fadlan raac halkan hagaha Mac ah.
Waxaad isku dayi kartaa mid ka mid ah habka hoose si aad u geliyaan files AVI aad:
In menu ugu weyn, maraan si File > dar Files , markaas dhirtuba iyada oo buugga deegaanka.
Jiid-iyo-hoos u files AVI aad si toos ah Converter ah.
2. Dooro wax soo saarka ka presets
In ay Qaabka Output Murayaad, waxaad ka heli doontaa video taageeray oo maqal ah qaabab kala duwan iyo sidoo kale model ah qalabka. Si ay u doortaan DivX sida qaab wax soo saarka aad, si fudud u jiheysan Qaabka > Video 's category iyo guji qaab DivX ka icon.
3. Ku bilow raanta
Hadda, aad dooratay DivX sida qaab wax soo saarka. Hawlaha qaab beddelidda Waxaad bilaabi kartaa garaacida ka badalo button on geeska midig ugu hooseysa interface ka. U yeelan doontaa in ay arkaan horumarka diinta iyo markii ay ka harsan tahay inta ay socoto Waxaad.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo AVI in ay DivX Video Converter for Windows
Qeybta 2: More fursadaha, AVI Free in DivX Converter, Online AVI in DivX Converter
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free AVI in DivX Converter
Inkasta oo laga yaabo in aad in aanay awoodin inay ku raaxaystaan ​​xawaaraha diinta aalladda-degdeg ah, waxaad weli edit karaa oo loogu badalo files AVI si aad u DivX aan khasaaro ka mid ah oo tayo leh. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa jecel aad video clips ka goobood oo online oo caan ah.
Pro: Waa lacag la'aan!
1. Doorashada Limited oo qaabab wax soo saarka.
2. Aan dib u soo ceshano karaa metadata u videos.
3. No taageero u DVD abuurka.
Qeybta 3: Online wmv in AVI Converter
Qeybta 4: Aqoonta Extended u AVI iyo DivX Qaabka
AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video DivX waxaa loo isticmaali karaa sida codec ah iyo sidoo weel. Sida dheeraad ah oo ka soo baxay qaab faylka AVI ah, waxa ay sidoo kale taageertaa video badan, audio iyo kuwan raadkaygay substitle.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file DivX ah
Xvid / DivX in Lugood: Sida loo soo dejinta DivX / Xvid Faylal ay si Lugood Library Your